Dhagxaanta midabka casaanka ah ee loo yaqaan 'pink pink opal' ayaa loo dhigi karaa siddooyin, silsilado, hilqado, jijin - fiidiyow
Waxaan ka sameysannaa dahab qaali ah oo leh dhagxaanta loo yaqaan 'opal dhagax' sida faraanti, hilqado, silsilad, jijin ama shaati pink opal waxaa badanaa lagu dhejiyaa dahabka ubax sida siddo kaqeybgalka.
Ka iibso opal casaan dabiici ah dukaankayaga
Dhagaxani waxaa laga helaa oo keliya Buuraha Andes ee Peru. Xaqiiqdii, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hadiyad ka timid Pachamama, oo ah ilaahii ugu horreeyay ee Inca ee midhaha iyo Hooyada Dunida. Opal waa nooc adag oo silica ah, badiyaa waxaa ku jira biyo u dhexeeya 5 ilaa 10%. Sidaa darteed waa noncrystalline, si ka duwan inta badan dhagxaanta kale.
Caanobooraha: SiO2 • n (H2O)
Culeys gaar ah: 2.10 g / cc
Nuxurka Biyaha: 3.20%
Qiyaasta Moh 5.5-6
Pink opal oo ka yimid Peru
Dhinacyada guud ee Peruvian opal
Sida laga soo xigtay falsafooyinka dhagaxa Peruvian Opal waa dhagax lagu kalsoon yahay oo xakamayn kara maskaxda iyo yareynaya arrimaha hurdada. Ku seexashada Peruvian opal waxaa la rumeysan yahay in uu daaweeyo xanuunka miyir-qabka ah ee soo dhaafay.
Dhagaxu wuxuu leeyahay awood nasasho, dhaqanku wuxuu inoo sheegayaa inay ka qaadi karto xiisad kasta isgaarsiinta waxayna u oggolaan doontaa fikradaha inay si deeqsinimo leh u socdaan. Waa dhagax aad u wanaagsan oo maskaxda lagu dejiyo, waxaana loo arkaa inay faa'iido u leedahay hurdo habeennimo oo wanaagsan.
Dhagaxan wuxuu kuxiranyahay qalbiga chakra, tamarta udub dhexaad u ah walaaca iyo wada xiriirka. Waxaa la sheegaa inuu yahay kan ugu awooda badan dhamaan dhagxaanta bogsiinaya. Waxay kordhin kartaa hal-abuurka iyo dhiirigelinta, dhagaxu wuxuu laxiriiraa nasiib wacan.
Micnaha dhagaxu waa bogsiinta ruuxiga ah. Waxaa loo tixgeliyey inay tahay dhagax aad u weyn oo lagu bogsado. Waxaa la sheegay inay sii deynayso xiisadda iyo inay keento nabad. Waxaa lagula talinayaa dadka u muuqda kuwa isku buuqsan iyo walwal. Waxay sii deyn kartaa nooc kasta oo walaac ah.
Muunad ku jirta mikroskoob
Sidee dhif u tahay opal casaan ah?
Dhagaxu aad buu dhif u yahay waxaana laga helaa meelo yar oo Dunida ka mid ah. Dhagxaanta waa casaan cad marka la soo saarayo.
Sideed u istcimaashaa pink opal?
Ruuxi ahaan waxay u keentaa nabad isla markaana ku sii deysaa qalbiga qofka, taasoo u oggolaaneysa qofka inuu ka soo baxo dhaawacii hore, xiisadda iyo walbahaarka. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo isku xirnaanta qofka meelihii malaa'igta oo furan oo cad. Niyad ahaan dhagaxu wuxuu caawin karaa kuwa leh cabsida, walwalka ama walaaca xad dhaafka ah.
Miyaad biyo gelin kartaa opal-casaan ah?
Dhagaxa qaaliga ahi wuxuu noqdaa mid madmadow leh haddii aad ku keydiso meel qalalan. Dabiici ahaan waxay ka kooban tahay biyo waana mid daaq badan. Waxaad ku ridi kartaa biyo ama cudbi qoyan si aad sannado u dhigatid.
Miyuu opal casaan qiimo leeyahay?
Sontes-ka tayada wanaagsan wuxuu noqon karaa wax qurux badan waxaana laga yaabaa inuu soo qaado qiimo dhan 100 US $ halkii carat. Kuwani waa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin midabka, hufnaanta, miisaanka la jaray iyo karatka kaas oo go'aamiya qiimaha guud.
Sideed ku ogaan kartaa inuu midabkiisu casaanka yahay mid run ah?
Inta badan opals-ka dhabta ahi waxay leeyihiin khaladaad midab ah, ama qaab qallooca ama qallafsan oo ay ugu wacan tahay samaysankooda dabiiciga ah halka dhagxaanta dadku sameeyeen ay u muuqan doonto mid hagaagsan.
Ka iibso opal casaan dabiici ah dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan ka sameysannaa dahab qaali ah oo leh dhagax buluug ah oo casaan ah siddo, silsilad, hilqado, jijin ama suumanka. pink opal waxaa badanaa lagu dhejiyaa dahabka loo yaqaan 'rose gold' sida wareegyada hawlgalka.